Ii-FAQs -Inging Fkidz Ergonomics Limited
Itheyibhile ye-Ergonomic kunye neeSeti zoSihlalo
Ewe sineqela elomeleleyo elikhulayo. Iimveliso zinokwenziwa ngokwesicelo sakho.
Iwaranti yethu yezixhobo kunye nomsebenzi. Ukuzinikela kwethu kukoneliseka kwiimveliso zethu. Kwiwaranti okanye hayi, yinkcubeko yenkampani yethu ukujongana nokusombulula yonke imiba yabathengi ukoneliseka ngumntu wonke